Yehowa Su Yɛ Fɛ—Kyerɛ Ho Anisɔ | Adesua
ASETENAM NSƐM Matie Yehowa Anya Nhyira Pii
Yehowa Su Yɛ Fɛ—Kyerɛ Ho Anisɔ
Yehowa Su Yɛ Fɛ—Ne Yam Ye, Ɔwɔ Ntease
Yehowa Su Yɛ Fɛ—Ɔyɛ Nokwafo, Ɔde Bɔne Firi
Gye Yehowa Nteɛso Tom, Ma Ɔnwene Wo
Mpanyimfo—Monnwudwo “Ɔkra a Wabrɛ”
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | June 2013
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Munsuasua Onyankopɔn sɛ mma adɔfo.”—EFE. 5:1.
Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛn ani agye Yehowa su ahorow ho paa?
Dɛn na obi bɛyɛ na afoforo atumi aka akɔ ne ho?
Yɛbɛyɛ dɛn asuasua Yehowa na yɛanyɛ animhwɛ?
1. (a) Yehowa su ahorow bɛn na Kristoni betumi asusuw ho? (b) Sɛ yegye bere susuw Onyankopɔn su ahorow ho a, mfaso bɛn na yebenya?
SƐ WOREDINNWEN Yehowa ho a, ne su ahorow bɛn na ɛba w’adwenem ntɛm? Ebia nea ɛbɛba yɛn mu pii adwenem ne ɔdɔ, atɛntrenee, nyansa, ne tumi. Nanso Yehowa wɔ su foforo pii a ɛyɛ fɛ. Sɛ yɛka sɛ yɛrekan Yehowa su a, yebetumi anya bɛboro 40, na wɔaka emu biara ho asɛm wɔ asafo nhoma mu. Wo de, hwɛ nneɛma dodow a yebetumi ahu afa Yehowa ho bere a yɛne yɛn abusua agye bere resua ade! Ɛyɛ ademude a ɛso bi nni. Ɛnde, ɔkwan bɛn so na adesua a ɛte saa betumi aboa yɛn? Ɛbɛma yɛn ani gye yɛn soro Agya no ho paa. Na bere a yɛn ani regye Yehowa ho nyinaa na yɛrebɛn no, na eyi bɛma yɛn kɔn adɔ sɛ yebesuasua no.—Yos. 23:8; Dw. 73:28.
2. (a) Dɛn na ɛbɛma yɛn ani agye Yehowa su ahorow ho paa? Ma mfatoho. (b) Dɛn na yebesusuw ho?
2 Sɛ yɛka sɛ obi ani gye biribi ho a, ɛkyerɛ dɛn? Ɛkyerɛ sɛ ade no som bo ma no. Egye bere na yɛn ani agye biribi ho. Momma yɛnhwɛ mfatoho yi: Aduan bi wɔ hɔ a wunnii bi da nanso wobɛhwɛ na w’ani abegye ho. Ɛyɛ dɛn ba saa? Nea edi kan, wote ne hua, afei woka hwɛ, na akyiri yi wusua sɛnea yɛyɛ no. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛn ani gye Yehowa su bi ho a, saa ara na ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Nea edi kan, ɛsɛ sɛ yehu saa su no; afei yebedwinnwen ho, na ne korakora yɛasuasua wɔ yɛn asetenam. (Efe. 5:1) Adesua yi ne abien a edi so no bɛma yɛahu Onyankopɔn su ahorow bi a yɛntaa nnwen ho, na ɛbɛma yɛn ani agye su a ɛte saa ho. Sɛ yɛresusuw su no biara ho a, yɛbɛhwɛ nea ɛkyerɛ, sɛnea Yehowa da no adi, ne sɛnea yebesuasua Yehowa na yɛanya su no bi.
YEHOWA ANIM KƆ NYƐ DEN
3, 4. (a) Dɛn na obi yɛ a, ɛkyerɛ sɛ n’anim kɔ nyɛ den? (b) Dɛn na Yehowa yɛ de kyerɛ sɛ n’anim kɔ nyɛ den?
3 Momma yenni kan nhwɛ nea enti a yebetumi aka sɛ Yehowa anim kɔ nyɛ den. Dɛn na ɛma yɛka sɛ obi anim kɔ nyɛ den? Ebia wobɛka sɛ, ‘Ɔyɛ obi a ɔtew n’anim, ɔwɔ afoforo ho adagyew, na worekɔ n’anim a wunsuro.’ Obi anom asɛm, sɛnea ɔyɛ ne ho, ne n’anim yɛbea na ɛbɛkyerɛ sɛ nnipa betumi akɔ n’anim anaa ɛbɛyɛ den ama wɔn sɛ wɔbɛyɛ saa.
4 Dɛn na Yehowa yɛ de kyerɛ sɛ n’anim kɔ nyɛ den? Yehowa ne Otumfoɔ pumpuni a ɔbɔɔ soro ne asase, nanso wabɔ yɛn anohoba sɛ bere biara a yɛbɛbɔ no mpae no, wayɛ krado sɛ obetie. (Monkenkan Dwom 145:18; Yesaia 30:18, 19.) Baabi a yɛwɔ biara yebetumi ne Onyankopɔn akasa bere tenten biara a yɛpɛ. Yebetumi akɔ n’anim bere biara a yɛpɛ efisɛ yenim sɛ ne bo mfuw yɛn. (Dw. 65:2; Yak. 1:5) Ɛtɔ bere bi a, Bible ka Yehowa ho asɛm te sɛ onipa, na ɛno ma yehu sɛ yebetumi akɔ n’anim. Nhwɛso bi ni: Odwontofo Dawid kae sɛ ‘Yehowa ani wɔ yɛn so’ na ‘ne nsa nifa kura yɛn mu denneennen.’ (Dw. 34:15; 63:8) Odiyifo Yesaia de Yehowa totoo oguanhwɛfo ho, na ɔkae sɛ: “Ɔbɛma ne nguammaa so wɔ ne basa so na waturu wɔn ne kokom.” (Yes. 40:11) Hwɛ anikasɛm! Yehowa pɛ sɛ yɛde yɛn ho fam ne ho te sɛ oguammaa a ɔbɔ oguanhwɛfo bo. Nokwasɛm ni, Yehowa yɛ Agya a ɔtew n’anim ma yɛn ampa! Ɛnde, yɛbɛyɛ dɛn asuasua no?
SU A ƐYƐ FƐ PAA
5. Adɛn nti na ehia sɛ mpanyimfo tew wɔn anim ma anuanom?
5 Ɛnkyɛe pii na wobisabisaa Adansefo bi a wɔwɔ aman horow so sɛ, “Su bɛn na w’ani gye ho paa wɔ asafo mu panyin ho?” Wɔn mu dodow no ara kae sɛ, “sɛ ɔpanyin tew n’anim ma wɔn” a wɔn ani gye paa. Ehia sɛ Kristoni biara tew n’anim, nanso sɛ yɛreka paa a, asafo mu mpanyimfo na ehia sɛ wɔda saa su yi adi kɛse. (Yes. 32:1, 2) Onuawa bi kaa nea enti a osusuw sɛ saa su yi ho hia paa. Ɔkae sɛ: “Sɛ ɔpanyin ntew n’anim mma anuanom a, su pa biara a ɔwɔ nkosi hwee.” Wunnye nni sɛ aba wɔ onuawa yi asɛm no mu? Ɛnde, dɛn na ɛwɔ obi ho a ɛma nkurɔfo ka bɛn no?
6. Dɛn na ɛma nkurɔfo ka kɔ obi ho?
6 Sɛ obi hu sɛ wudwen ne ho a, ɛnyɛ den sɛ ɔno nso bɛka aba wo ho. Sɛ ɔpanyin bi dwen afoforo ho na wɔn asɛm hia no a, mpanyin ne mmofra nyinaa hu. (Mar. 10:13-16) Abarimaa bi a wadi mfe 12 a wɔfrɛ no Carlos kae sɛ: “Sɛ yɛkɔ Ahenni Asa so na mihu sɛ mpanyimfo no reserew na wɔne obiara redi agorɔ a, na m’ani agye paa.” Ɔpanyin bi nneyɛe na ɛbɛkyerɛ sɛ anuanom bɛka akɔ ne ho anaa wɔrenyɛ saa; ɛnyɛ n’ano kɛkɛ na ɔde bɛka sɛ anuanom mmra ne nkyɛn. (1 Yoh. 3:18) Ɛnde, dɛn na ɔbɛyɛ na afoforo atumi aka akɔ ne ho?
7. Adɛn nti na nhyiam baagye tumi twetwe nkɔmmɔ? Dɛn na yesua fi mu?
7 Momma yɛmfa asɛm yi nyɛ ntotoho. Bere bi onua bi kɔɔ nhyiam wɔ amannɔne, na bere a wowiee nhyiam no a ɔte wimhyɛn mu reba no, na ne baagye bɔ no. Wimhyɛn no mu dwumayɛni bi hui sɛ wɔakyerɛw baagye no so “Onyankopɔn Ahenni Mmra!” Enti ɔka kyerɛɛ onua no sɛ, “Ampa, ɛmmra. Mɛba ma yɛabɔ ho nkɔmmɔ kakra.” Ampa ara wonyaa bere bɔɔ nkɔmmɔ na odwumayɛni no gyee nsɛmma nhoma. Yɛn mu pii anya osuahu a ɛte saa pɛn. Sɛ yɛbɔ nhyiam baagye a, adɛn nti na nkurɔfo tumi bɛn yɛn? Efisɛ ɔkwan bi so no, ɛte sɛ nea baagye no reka akyerɛ nkurɔfo sɛ: “Munsuro, mommra me nkyɛn. Mopɛ sɛ muhu baabi a merekɔ a, mummisa me.” Sɛ nkurɔfo hu baagye no a, wohu sɛ yɛayɛ krado sɛ yɛne wɔn besusuw yɛn gyidi ho. Enti ɛsɛ sɛ anuanom hu biribi wɔ asafo mu mpanyimfo ho a ɛka kyerɛ wɔn sɛ: “Munsuro, mommra me nkyɛn.” Dɛn na mpanyimfo no de bɛkyerɛ saa?
8. Dɛn na mpanyimfo yɛ a, afoforo hu sɛ wodwen wɔn ho? Wɔyɛ saa a, ɛka asafo no mufo dɛn?
8 Ɔman biara ne n’amammerɛ, nanso sɛ yɛserew kyerɛ yɛn nuanom na yɛde yɛn nsa to wɔn nsam kyia wɔn a, wobehu sɛ yedwen wɔn ho. Henanom na ɛsɛ sɛ wodi kan yɛ eyi? Momma yɛnhwɛ Yesu nhwɛso no. Yesu ne n’asuafo no yɛɛ nhyiam bi, na Bible ka sɛ “Yesu twiw bɛn wɔn” ne wɔn kasae. (Mat. 28:18) Ɛnnɛ nso ɛsɛ sɛ mpanyimfo twiw bɛn wɔn nuanom ne wɔn kasa. Wɔyɛ saa a, ɛka asafo no mufo dɛn? Onuawa kwampaefo bi a wadi mfe 88 kae sɛ: “Sɛ mekɔ Ahenni Asa so na mpanyimfo no serew kyerɛ me na wɔka nkuranhyɛsɛm kyerɛ me a, ɛka me koma paa. Eyi na ɛma m’ani gye wɔn ho.” Onuawa foforo nso kae sɛ: “Sɛ midu Ahenni Asa so na mpanyimfo no tew wɔn anim kyia me a, ɛma mihu sɛ wodwen me ho. Eyi yɛ nneɛma nketenkete nanso ɛsom bo ma me paa.”
TEW W’ANIM, NYA AFOFORO HO ADAGYEW
9, 10. (a) Nhwɛso fɛfɛɛfɛ bɛn na Yehowa ayɛ ama yɛn? (b) Dɛn na mpanyimfo yɛ a, ɛkyerɛ sɛ wɔwɔ afoforo ho adagyew?
9 Sɛ yenni afoforo ho adagyew a, wɔrentumi nka mma yɛn ho. Yehowa ayɛ eyi ho nhwɛso fɛfɛɛfɛ a yebetumi asua. Bible ka sɛ “ɔne yɛn mu biara ntam nware.” (Aso. 17:27) Ɛsɛ sɛ asafo mu mpanyimfo nya bere ne mpanyin ne mmofra nyinaa bɔ nkɔmmɔ ansa na yɛafi asafo nhyiam ase, na yɛpɔn nso a, wobetumi ayɛ saa. Eyi bɛkyerɛ sɛ wɔwɔ anuanom ho adagyew. Onua kwampaefo bi kae sɛ: “Sɛ ɔpanyin bi bisa me sɛnea me ho te na ɔtwɛn tie nea mɛka a, mihu sɛ mesom bo ma no.” Onuawa bi a wasom Yehowa bɛyɛ mfe 50 kae sɛ: “Sɛ yɛpɔn adesua na mpanyimfo no gye bere ne me bɔ nkɔmmɔ a, mihu sɛ me so wɔ mfaso.”
10 Ɛyɛ nokware sɛ mpanyimfo wɔ nneɛma pii yɛ, nanso sɛ yɛkɔ adesua a, ɛsɛ sɛ wonya anuanom ho bere. Eyi ne ade a ɛsɛ sɛ ehia wɔn paa.
YEHOWA NYƐ ANIMHWƐ
11, 12. (a) Dɛn na obi yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ animhwɛ? (b) Dɛn na Bible ka a ɛkyerɛ sɛ Yehowa nyɛ animhwɛ?
11 Su foforo a ɛyɛ fɛ wɔ Yehowa ho ne sɛ ɔnyɛ animhwɛ. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ obi nyɛ animhwɛ? Obi a ɔte saa ne obiara di no pɛpɛɛpɛ, ɔnnɔ obi ntan bi, ɔnyɛ nyiyim. Sɛ obi nyɛ animhwɛ a, ne komam nsusuwii ne ne nneyɛe nyinaa bɛkyerɛ. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, sɛ yɛne obiara bedi no pɛpɛɛpɛ a, efi ase yɛn komam. Sɛ obi “nhwɛ nnipa anim” a, ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ biribi mma obi na ontwa ɔfoforo nnyaw. (Aso. 10:34) Obi a ɔte saa nhwɛ obi ho ne ne dibea na ɔne no adi, na mmom sɛnea onipa no te ankasa.
12 Sɛ yɛreka obi a wada no adi paa sɛ ɔnyɛ animhwɛ a, ɛyɛ Yehowa. N’Asɛm ka sɛ ‘ɔnhwɛ nnipa anim’ anaa “ɔnyɛ animhwɛ.” (Monkenkan Asomafo Nnwuma 10:34, 35; Deuteronomium 10:17.) Asɛm bi a esii Mose bere so ma yehu eyi yiye.
Selofehad mmabea no ani gyei sɛ Onyankopɔn anyɛ animhwɛ (Hwɛ nkyekyɛm 13, 14)
13, 14. (a) Asɛm bɛn na Selofehad mmabea baanum no hyiae? (b) Dɛn na Yehowa yɛe a ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ animhwɛ?
13 Aka kakra ma Israelfo adu Bɔhyɛ Asase no so no, mmabaa baanum bi hyiaa asɛm bi a na ɛhaw wɔn paa. Ná mmabaa yi yɛ anuafoɔ a wɔnwaree. Asɛm bɛn na wohyiae? Na wonim sɛ wɔn abusua nsa bɛka asase a wobetwa ama wɔn papa no. (Num. 26:52-55) Na wɔn papa Selofehad fi Manase abusua mu, nanso saa bere no na wawu. Yɛhwɛ wɔn amammerɛ mu a, Selofehad mmabarima na anka asase no bɛkɔ akodi wɔn nsam, nanso na ne mma nyinaa yɛ mmea, ɔbarima biara nnim. (Num. 26:33) Ɛnde, wɔde asase no bɛma abusuafo foforo a wɔwɔ nkyɛn na wɔatwa ne mmabea yi agyaw anaa?
14 Mmea baanum yi de asɛm no kɔtoo Mose anim. Wobisaa no sɛ: “Adɛn na ɔbabarima a yɛn papa nni nti wonyi ne din mfi n’abusua mu?” Wɔkae sɛ: “Yɛsrɛ mo, momma yɛn agyapade wɔ yɛn papa nuanom mu.” So Mose bɔɔ wɔn asɛm no gui kae sɛ, ‘Nea mmara no aka ara na aka’? Dabi, na mmom ɔde “wɔn asɛm no too Yehowa anim.” (Num. 27:2-5) Dɛn na Yehowa yɛe wɔ ho? Ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Asɛm a Selofehad mmabea no reka no yɛ ne kwan so. Enti ma wɔn agyapade wɔ wɔn papa nuanom mu. Ma wɔn papa agyapade mmedi wɔn nsam.” Yehowa amma anso hɔ ara; mmom ɔhyɛɛ mmara foforo wɔ asɛm no ho. Ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sɛ ɔbarima bi wu na onni ɔbabarima a, momfa n’agyapade mma ne babea.” (Num. 27:6-8; Yos. 17:1-6) Efi saa bere no, mmara yi boaa Israelfo mmea a asɛm a ɛte saa too wɔn no.
15. (a) Ɔkwan bɛn so na Yehowa ne ne nkurɔfo di, titiriw wɔn a wɔn asɛm yɛ mmɔbɔ? (b) Nsɛm foforo bɛn na ɛwɔ Bible mu a ɛkyerɛ sɛ Yehowa nyɛ animhwɛ?
15 Asɛm yi kyerɛ sɛ Yehowa nyɛ animhwɛ. Ná mmea baanum no nni kamafo, nanso bere a Yehowa tee wɔn asɛm no odii wɔn ni sɛnea odii Israelfo nyinaa ni no. (Dw. 68:5) Eyi yɛ Bible mu nhwɛso biako pɛ a ɛkyerɛ sɛ Yehowa ne n’asomfo nyinaa di no pɛpɛɛpɛ; ɔnyɛ animhwɛ.—1 Sam. 16:1-13; Aso. 10:30-35, 44-48.
YEBETUMI ASUASUA YEHOWA
16. Dɛn na ɛbɛboa yɛn na yɛne obiara adi no pɛpɛɛpɛ?
16 Yɛbɛyɛ dɛn asuasua Yehowa na yɛanyɛ animhwɛ? Kae sɛ, sɛ obi nyɛ animhwɛ a, ne komam nsusuwii ne ne nneyɛe nyinaa bɛkyerɛ. Sɛ obi nyɛ animhwɛ a, ɛnde ɔne obiara bedi no pɛpɛɛpɛ. Yɛn mu biara nni hɔ a ɔbɛka sɛ ɔyɛ animhwɛ. Nanso ɛnyɛ mmerɛw sɛ yɛn ankasa behu sɛnea yɛte. Ɛnde, dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛahu paa sɛ yɛnyɛ animhwɛ? Bere bi a Yesu pɛ sɛ ohu nea nkurɔfo ka fa ne ho no, obisaa ne nnamfo paa sɛ: “Nkurɔfo se onipa Ba no ne hena?” (Mat. 16:13, 14) Wubetumi asua nea Yesu yɛe no. Wubetumi abisa w’adamfo a wugye no di sɛ woyɛ animhwɛ anaa. Ebia ɔbɛka akyerɛ wo sɛ wohwɛ kasa a obi ka, ne dibea, anaa sika a ɔwɔ na wo ne no di. Sɛ w’adamfo no ka saa kyerɛ wo a, dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Bɔ Yehowa mpae denneennen na srɛ no sɛ ɔmmoa wo na sesa na wone obiara nni no pɛpɛɛpɛ sɛnea Yehowa ankasa yɛ no.—Mat. 7:7; Kol. 3:10, 11.
17. Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛnyɛ animhwɛ?
17 Sɛ yedi asafo no mufo nyinaa ni na yeyi yɛn yam boa wɔn a, ɛkyerɛ sɛ yɛnyɛ animhwɛ, na ɛno nso bɛkyerɛ sɛ yɛresuasua Yehowa. Yɛmfa no sɛ yɛreto nsa afrɛ anuanom aba yɛn fie. Ɛbɛyɛ papa sɛ yɛbɛfrɛ anuanom ahorow ahorow nyinaa; ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi wɔn a ɛsono wɔn kasa, ahiafo, nnyanka, ne akunafo. (Monkenkan Galatifo 2:10; Yakobo 1:27.) Bio nso sɛ yɛreyɛ Ahenni ho asɛmpaka adwuma no a, yɛka asɛm no kyerɛ obiara biara. Ahɔho a wɔabɛtena yɛn man mu ka ho. Wo de hwɛ, yɛwɔ Bible ho nhoma wɔ kasa bɛyɛ 600 mu! Eyi yɛ anigyesɛm, na ɛkyerɛ sɛ Yehowa ahyehyɛde no nyɛ animhwɛ.
18. Yehowa anim kɔ nyɛ den na ɔnyɛ animhwɛ. Dɛn na w’ankasa wobɛyɛ de akyerɛ sɛ w’ani gye su a ɛte saa ho?
18 Yɛabehu sɛ Yehowa anim kɔ nyɛ den na ɔnyɛ animhwɛ. Sɛ yegye bere susuw eyi ho a, ɛma yɛn ani gye Yehowa ho paa. Ɛsɛ sɛ anigye a ɛte saa ka yɛn ma yesuasua Yehowa su ahorow no na yɛda no adi kyerɛ yɛn nuanom ne wɔn a yɛka asɛm no kyerɛ wɔn nyinaa.
“Yehowa bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa.”—Dw. 145:18 (Hwɛ nkyekyɛm 9)
‘Yehowa mo Nyankopɔn nyɛ animhwɛ.’—Deut. 10:17 (Hwɛ nkyekyɛm 17)
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2013